Samsung yaizo "tora" Apple ine chigunwe chigunwe pane iyo skrini | IPhone nhau
Samsung yaizo "tora" Apple neinonzwa zvigunwe pachiratidziri
Sezvakataurwa nhepfenyuro yeJapan, inotevera Samsung Galaxy Note 9 inogona kusanganisira nyowani chigunwe chekunzwa pahwindo, sezvo Apple yakaedza kuisa mukati mayo iPhone X, kunyangwe sezvaungaverenga gare gare, uku hakusi kufambira mberi, asi "hunyengeri" kukwezva vatengi.
Vagadziri veSamsung vangave vachiedza kushandisa tekinoroji nyowani mune ayo OLED skrini kushanda senzvimbo yechiedza cheiyi sensor, zvakare kufarira iyo hupenyu hwebhatiri.
2 Kudzoka kuchokwadi
Zvichida, iyi nyowani Samsung chishandiso yaizoona mwenje wezuva pakati pegore rinouya uye yaitozosanganisira izvi chigunwe chekunzwa pasi pechidzitiro. Ruzivo urwu rwakaratidzwa mushumo we Ming-Chi Kuo iyo yawakatumira kune vatengi munguva pfupi yapfuura.
Zvekubatanidzwa kweiyi nyowani nyowani iwe unofanirwa kutendeukira kune Vazhinji vanopa, mumwe wavo ari zvakare mutengesi kuApple: Synaptics. Pamusoro peizvi, maviri matsva akaonekwa ayo sezviri pachena akatotumira mamwe masampula kuSamsung, senge BeyondEyes uye Samsung LSI. Iyo yekupedzisira ndeye chikamu cheSamsung pachayo.
Chaizvoizvo, "kufambira mberi" uku kwekambani inokwikwidza yeApple ingangove danho rekutanga ivo vachikwanisa kugadzira tekinoroji yakafanana neiyo Apple yakakwanisa kuisa mune yayo nyowani iPhone X, senge Face ID, sezvo isu tisingakwanise kukanganwa kuomarara uye simba reiyi sensor nyowani.
Zvinoenderana nekudzidza kwakaitwa, apuro inogona kuva pakati 18 uye 30 mwedzi mukana zvine chekuita nemhando dzakasiyana dzeApple zvishandiso, sezvataigona kuverenga mune Nyaya yapfuuraKana zviri zvekuisirwa kweinoshamisa uye shanduko tekinoroji sezvayange iri, ndizvo uye ichave iri iyo Face ID. Kunyangwe zvisiri izvo chete, asi zvakare zvinosanganisira akati wandei udzamu sensors mune iyo kamera iyo inobvumidza iri nani mhando yeiyo 3D kubereka izvo zvatiri kutora, chingave chiri chiso chedu cheiyo kuonekwa kwiso kana kune chero rimwe rebasa rinoitwa kugoneka neiyi tekinoroji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone nhau » Samsung yaizo "tora" Apple neinonzwa zvigunwe pachiratidziri
Muna 2018 Face ID ichauyawo kumhuri yePadad
Amazon inotangisa yayo yega iPhone kuchaja uye headphone adapta